Ogaden News Agency (ONA) – GAADIID CADAWGU LEEYAHAY OO LAGU GUBAY GOOBO KALA DUWAN
GAADIID CADAWGU LEEYAHAY OO LAGU GUBAY GOOBO KALA DUWAN
Posted by ONA Admin	/ March 31, 2012
CWXO ayaa March 30, 2012 kamiin u galay kolanyo gaadiid ah oo maraysay meel u jirta magaalada Qabri-dahar qiyaastii 7 km dhinaca koonfureed, waxaana halkaa lagu gubay hal Baabuur oo dhamaan ciidankii saraa uu noqday dhimasho iyo dhaawac culus. Waxaa kale oo khasaare la soo gaadhsiiyay Baabuur kale oo ka mid ahaa kolonyadaa. Hawl-galkan ayaa cadawga lagu gaadhsiiyay dhimasho iyo dhaawac badan sida wariyayaasha Q/dahare ay xaqiijiyee.
Isla xalay waxaa in ka badan laba jeer weerar mir ah lagu qaaday ciidanka cadawga oo marayay Fardhiig oo u jirta magaalada Qabridahay ilaa 12km halkaas oo loogu gaystay khaasre dhimasho iyo dhaawacba leh.
18March 2012 ayay CWXO dabin ay u dhigeen kolanyo gaadiid ah oo cadawgu leeyahay oo maraysay agagaarka Karin-barkhadlle oo u dhaw magaalada Sagaga waxaana halkaa ku gadoomay gaadhi uu leeyahay cadawgu kaas oo ciidankii saraa uu noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay. Sidoo kale 24March 2012 ayay waxay CWXO dabin kale u dhigeen kolanyo cadawgu leeyahay meel u muuqata tuulada Mudulka oo qiyaastii 8 km u jirta magaalada Dhagaxmadaw, waxaana halkaa lagu naafeeyay hal Baabauur oo uu leeyahay cadawgu iyadoo ciidankii saraana uu noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay. Guud ahaan Baabuurtan loo adeegsaday dabinada kala duwan ayaa noqday hawlgab rasmi ah.
CWXO ee JWXO ayaa wada dagaalo xeeladaysan oo kala duwan kuwaas oo cadawga ku abuuray argagax oy ka soo gaadheen cadawga khaasre balaadhan oo isugu jira naf iyo maalba.